» “अहिले सम्म केपी ओली, जस्तो उत्कृष्ट नेता कोहि छैन – टोपबहादुर रायमाझी” “अहिले सम्म केपी ओली, जस्तो उत्कृष्ट नेता कोहि छैन – टोपबहादुर रायमाझी” – हाम्रो खबर
“अहिले सम्म केपी ओली, जस्तो उत्कृष्ट नेता कोहि छैन – टोपबहादुर रायमाझी”
2021, September 30th, Thursday
“काठमाडौँ। एमालेमा लागेका पूर्व माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओरालो लागेपछि आफूहरू एमालेमा फर्केको टिप्पणी गरेका छन्।”
“एक अनलाइन सँगको अन्तर्वार्तामा रायमाझीले प्रचण्ड ओरालो लागेपछि माओवादी केन्द्र खारेज गरेर नेकपा बनाएको बताएका हुन् । प्रचण्ड ओरालो लाग्दै गएपछि हामीले माओवादी पार्टीलाई खारेज गरेर नेकपा बनाएका हौँ, अन्तर्वार्ताका क्रममा रायमाझीले भने, ‘अहिले नेकपाको निरन्तरतामा छौं, सर्वोच्च अदालतका कारण एमाले भन्नुपर्ने स्थिति आयो।”
“उनले अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताएको भएपनि आफूहरू पूर्ववत पार्टीमा फर्किन नसकेको बताए । अदालतको फैसलाका कारण हामी पूर्वस्थानमा फर्केनौं, रायमाझीले भने, ‘अदालतले कसैलाई एमाले हौ, कसैलाई माओवादी हौ, कसैलाई जनमोर्चा हौ भनेर भन्न मिल्छ र?
“हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हुँदैन ?”
अन्तर्वार्ताका क्रममा रायमाझीले अहिलेका सबै सिनियर नेतामध्ये केपी शर्मा ओली उत्कृष्ट नेता भएको दाबीसमेत गरे । ‘समकालीन सिनियर नेतामध्ये केपी शर्मा ओली सबैभन्दा राम्रो नेता हो, रायमाझीको तर्क थियो।”
“रायमाझीले एमालेमा माधवकुमार नेपालहरू पीडित भएजस्तै आफूहरू पनि प्रचण्डबाट पीडित भएको संकेत गरे । ‘केपीजीसँग माधवजी पीडित हुनुभयो भने, प्रचण्डबाट पीडित हुने नेता पनि त होलान् नि ! रायमाझीले भने, ‘म त पीडित होइन, तर मेरो उहाँसँग असहमति हो।”
“जतिबेला प्रचण्डसँग थियौं, हाम्रो त्यतिबेलै संघर्ष चलिरहेको थियो।””